Singapore nwere paspọtụ kacha mma ịga ụwa | Akụkọ Njem
Singapore nwere paspọtụ kacha mma iji gaa ụwa
Maria | | Rep. Singapore, njem
Foto | AsiaOne
Otu n’ime nchegbu ndị njem na-eme n’oge ezumike ha na mba ofesi bụ ma ha achọrọ visa ịbanye mba ụfọdụ na otu esi enweta ya n’okwu a. Inwe paspọtụ anaghị ekwe gị nkwa na anyị nwere ike ịzọ ụkwụ na mba ọzọ ebe ọ bụ na ọ dabere na nkwekọrịta nkwekọrịta mba abụọ nke otu sitere na nke aga. N'ụzọ dị otú a, ụfọdụ akwụkwọ ikike ngafe ga-aka mma ịhụ ụwa karịa ndị ọzọ n'ihi na site na ya, a na-emepe ọtụtụ ọnụ ụzọ na njikwa nchekwa ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ windo mbata na ọpụpụ.
Dabere na mmelite nke Paspọtụ Index nke onye ndụmọdụ ndụmọdụ ego ụwa zuru ụwa ọnụ bụ Arton Capital (nke na-ahụ maka ịdụ ndị mmadụ ọdụ chọrọ inweta ikike obibi na nke ụmụ amaala) ndụmọdụ Paspọtụ Singapore bụ nke kachasị ike n'ụwa ma a bịa n'ịga njem n'enweghị mkpa ịga n'ihu. Ogo a na-eme nhazi ya dabere na ọnụọgụ mba dị na mbara ala ndị njem nwere ike ịga na-enweghị visa.
Singapore rịgoro na ndepụta ahụ mgbe Paraguay kpebiri iwepụ ihe mgbochi ọbido ugbu a nye ndị bi na mba Eshia. Mgbe mmezigharị ahụ, ha nwere ike ịnweta mba 159 na enweghị visa. Mana olee mba ndị ọzọ mezue ọnọdụ kachasị elu na ogo ahụ?
1 Kedu ihe bụ paspọtụ na gịnị maka ya?
2 Kedu ka esi ede aha a?
3 Kedu ụkpụrụ na-eme ka paspọtụ ka mma ma ọ bụ ka njọ?
4 Ọ nwere ike ịzụta paspọtụ?
5 Ọchịchọ ịmata banyere akwụkwọ ikike ngafe
5.1 Nye Chepụtara Paspọtụ Ahụ?
5.2 Kedu aha paspọtụ?
5.3 Ihe osise iji zere adịgboroja
5.4 Paspọtụ kacha mma na nke kacha njọ maka njem
Kedu ihe bụ paspọtụ na gịnị maka ya?
Ọ bụ akwụkwọ gọọmentị nyere site na obodo ụfọdụ mana enwere nkwado zuru ụwa ọnụ. Formdị akwụkwọ ndetu ya bụ iji oge gara aga nke ejiri aka dee akwụkwọ ikike. Ka ọ dị ugbu a, n'ihi oghere nke teknụzụ, paspọtụ n'ụdị akwụkwọ na-aga n'ihu na-abụ usoro kachasị baa uru, agbanyeghị ole ha nwere mgbape dị mfe ịgụ. Na usoro niile Ọ bụ iji gosipụta na onye ọ bụla buuru ya nwere ike ịbanye ma pụọ ​​na mba n'ihi na enyere ya ikike ime ya ma ọ bụ dị ka ihe nnọchianya nke mba ha na-anabata Ọchịchị ahụ.
Kedu ka esi ede aha a?
Iji mepụta ndepụta a, a na-eburu mba 193 so na UN, yana Hong Kong, Palestine, Vatican, Macao na Taiwan.
Paspọtụ Singapore bụ oge mbụ ọ jisiri ike tinye ndepụta ahụ na oge mbụ mba Asia na-enweta ya. Ihe ngosi dị mkpa na-atụle na ha enwerela onwe ha afọ iri ole na ole na, n'adịghị ka mba ndị mejupụtara mpaghara Schengen, ọ bụ naanị Singapore na-eme mkpebi ụfọdụ na-adabereghị na otu.
Enwere ike itinye Singapore na ASEAN (Association nke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia) mana ha họọrọ ịhapụ ịnọ na ya.
Ndị a bụ mba nwere paspọtụ nke ị nwere ụlọ ọrụ kachasị mma iji gaa mba ọzọ:
Sweden na South Korea 157
Denmark, Italy, Japan, Spain, Finland, France, United Kingdom na Norway 156
Luxembourg, Portugal, Belgium, Holland, Switzerland na Austria 155
United States, Ireland, Malaysia na Canada 154
New Zealand, Australia na Gris 153
Iceland, Malta na Czech Republic 152
Latvia, Poland, Lithuania, Slovenia na Slovakia 149
Kedu ụkpụrụ na-eme ka paspọtụ ka mma ma ọ bụ ka njọ?
Dabere na onye ndụmọdụ London Henley & Partners, ikike mba nwere ịnweta akwụkwọ ikike ịhapụ akwụkwọ visa bụ ngosipụta nke mmekọrịta mba ọzọ na mba ndị ọzọ. N'otu aka ahụ, ihe visa chọrọ chọpụtakwara site na nnabata visa, ihe egwu visa, ihe egwu nchekwa, na imebi iwu ọpụpụ.
Ọ nwere ike ịzụta paspọtụ?
Ọ bụrụ na ọ kwe omume. Companylọ ọrụ ahụ nke kwadebeworo ndepụta ahụ na-enyere ndị chọrọ ịnweta paspọtụ nke abụọ, nke bara uru karị imeghe ọnụ ụzọ na-achọ mba ebe enwere ike ịnweta paspọtụ site na itinye ego. N'ezie, ego a ga-etinye ego agaghị erughị nde dollar abụọ na 2.
Dị ka ọ dị, ndị si mba ọzọ na-achọ paspọtụ ka mma sitere na ebe ndị na-amachibido iwu ma ọ bụrụ na ị nweta visa dịka Middle East, China ma ọ bụ Russia.
Ọchịchọ ịmata banyere akwụkwọ ikike ngafe
Nye Chepụtara Paspọtụ Ahụ?
N'ime Akwụkwọ Nsọ enwere ederede kwuru maka akwụkwọ nyere onye nyere ya ikike isi n'otu ebe gaa ebe ọzọ mana ọ bụ na Medieval Europe ebe akwụkwọ ndị ndị ọchịchị nke ebe ahụ malitere malitere ịpụta nke mere ka ndị mmadụ banye n'obodo ahụ na ụfọdụ nweta.
Otú ọ dị, ọ bụ Henry V nke England ka e si mepụta akwụkwọ ikike ngafe dị ka akwụkwọ njirimara gafere ókè-ala.
Kedu aha paspọtụ?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ paspọtụ niile dị nha 125 × 88 na ọtụtụ nwere mkpokọta 32.e, ịrara naanị ihe dị ka peeji 24 maka visa ma ọ bụrụ na akwụkwọ ahụ agwụla ọ dị mkpa ịrịọ ọhụrụ.
Ihe osise iji zere adịgboroja
Iji zere adịgboroja, ihe osise nke ibe paspọtụ na ink dị mgbagwoju anya. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe banyere paspọtụ Spanish, mkpuchi azụ na-egosi njem mbụ Columbus na America, ebe ọpụpụ anụmanụ kachasị mma n'ụwa na-egosi na peeji visa. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka Nicaragua, paspọtụ gị nwere ụdị nchekwa 89 dị iche iche na - eme ka o sie ike ịbịara.
Paspọtụ kacha mma na nke kacha njọ maka njem
Countriesfọdụ mba dịka Germany, Sweden, Spain, United Kingdom ma ọ bụ United States nwere ezigbo akwụkwọ ikike ngafe iji gafee ụwa ebe ha nwere ike ịnweta ihe karịrị mba 150. N’aka nke ọzọ, mba dịka Afghanistan, Pakistan, Iraq, Syria, Libya, Sudan ma ọ bụ Somalia nwere ndị njem pere mpe kachasị njem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Rep. Singapore » Singapore nwere paspọtụ kacha mma iji gaa ụwa
6 sestieri nke Venice nke ikwesiri ịma na njem gị